Maxey tahay sababta uu maanta u baaqday Kalfadhiga 8-aad ee Baarlamaanka Koofur Galbeed? – Bandhiga
Home Maxey tahay sababta uu maanta u baaqday Kalfadhiga 8aad ee Baarlamaanka Koofur Galbeed?
Maxey tahay sababta uu maanta u baaqday Kalfadhiga 8-aad ee Baarlamaanka Koofur Galbeed?
in Maxey tahay sababta uu maanta u baaqday Kalfadhiga 8aad ee Baarlamaanka Koofur Galbeed?
Waxaa maanta lagu waday Magalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay inuu ka furmo Kal-fadhiga 8aad ee Golaha Wakiilada Koonfur Galbeed,iyadoona uu baaqday kulankaasi.
Baaqashada kal-fadhigan ayaa waxaa uu yahay mid ku soo aaday xili uu yahay kii ugu dambeeyey maadaama Golaha Wakiilada waqtigooda uu dhamaaday, islamarkaana uu ku egyahay 1-da Bisha December ee Sanadkaan 2019 oo hal bil kaliya u hartay.
Waxyabaha keeny inuu baaqday ayaa waxaa lagu sheegay inay tahay kadib markii la isku fahmi waayeen mudo kordhin loo sameeyo Baarlamaanka Koofur Galbeed Soomaaliya, kadib markii xalay ilaa iyo maanta kulamo looga hadlayo arintaasi ay ka socotay Magaalada Baydhabo, iyadoona la isku afgartay in la kala diro Golaha wakiilada ee maamulka Koofur Galbeed Soomaaliya.
Waxaa magaalada Baydhabo ku sugan Guddoomiyaha Golaha Shacabka Soomaaliya iyo dhigiisa dalka Jabuuti waxaa ayna halkaasi u tageen inay ka qeyb galaan kulanka Golaha wakiilada Koofur Galbeed Soomaaliya, hayeeshee uu maanta baaqday, waxaana baaqday safarkii maanta ay dib ugu soo laaban lahaayeen Muqdisho.